nametrahany tanana ny mpino sy nitsofany rano ireto farany no nanokafany ny taona vaovao 2020 ny Sabotsy teo. Fantatra tamin’izany fa mpihainon’ny radio FM FOI ny an-tsasak’ireo mpino tonga tao Mahamasina toerana nanaovana ny hetsika raha mpino ao amin’ny fiangonana kosa ny an-tsasany izay misy hatrany France, Allemagne, Seychelles, Maurice ary La Réunion. Nambaran’ny Apostoly Benjamina nandritra izany fa mila an’Andriamanitra ny fiainan’ny isan-tokantrano. Hanomboka hirotoroto indray mantsy hoy izy manomboka amin’ity volana Janoary ity ka betsaka ireo hanadino an’Andriamanitra izay mety hitarika ho amin-java-kafa mihitsy. Ho an’ny fiangonana FM FOI manokana dia nomarihiny fa mila fitahiana avy amin’Atra ny mpino ao aminy. Mila fahendrena sy fahalalana ihany koa hoy izy hisorohana ny fisarahana ara-panambadiana sy ny olana eny anivon’ny fiaraha-monina izay tena maro sosona tokoa no tonga eny amin’ny tribonaly amin’izao fotoana izao. Miantso ny olona mba hivavaka amin’Andriamanitra marina araka izany ity Apostoly ity. Nomarihiny moa fa tsy manavaka finoana izy ireo ary vonona ny handray ireo mangetaheta na iza izy na iza.